Faharesen’i Barea: tovolahy iray sy teratany vahiny iray naratra | NewsMada
Noho ny tandrevaka sa … nampandosirina ?: Tsafatsoaka niaraka amin’ny rojovy ireo jiolahy roa ...novembre 8, 2019
Parmi les priorités de Naina A. : La restitution des terrains appartenant à la CUA ...novembre 8, 2019
Baccalauréat 2e session : 18% de réussite pour Antananarivo
Mahazoarivo: mpiasa roa lahy maty nihotsahan’ny tany
Renouveau de la capitale : le candidat Naina A. fait son Velirano
Fampahafantarana ny «Veliranon’Iarivo»: fanambin’ny kandidà Naina ny hanarina an’Antananarivo
Faharesen’i Barea: tovolahy iray sy teratany vahiny iray naratra
Par Taratra sur 13/07/2019
Hafakely! Mpivady ka teratany malagasy ny vehivavy raha teratany vahiny koa ilay raim-piananakaviana nifandratra tany Toamasina, nandritra iny lalao ampahefa-dalana nifanandrinan’ny Barean’i Madagasikara sy ry zareo Tonizianina, omaly alina, iny.
Mafy tamin’ilay renim-pianakaviana ny teny tsy voahevitra nataom-badiny izay noraisin’ity renim-pianakaviana ity ho fanambaniana ny maha Malagasy azy ka novelesiny tamin’ny lapoaly mbola nisy menaka mafana rangahy vadiny. Vokany, naratra mafy teo amin’ny lohany ilay raim-pianakaviana vadiny ka nentina notsaboina haingana tao amin’ny hopitaly. Nilaza ilay niharam-boina fa hitory am-badiny noho ity raharaha fandratrana azy ity.
Fa tovolahikely iray vao 18 taona kosa no nampisavoritaka ny fokonolona tao Analankinina Hopitalibe, omaly vao maraina. Tsy niala tao am-bavany ny faharesen’ny ekipam-pirenena malagasy izay naverimberiny teo am-bavany hoe “Barea, Barea” sady nanakorontana entana rehetra tao an-tokantranony izay. Voatery nandry andraikitra ny fokonolona ka nofatorana izy fa lasa adala vokatry ny fahitany ny faharesen’ny Barean’i Madagasikara. Samy nanana ny fahitany iny lalao iny ny rehetra ary raha ho an’ny mponina tao Toamasina manokana, tao anatin’ny fitaintainana ka nahatonga ireo olona sasany tsy nahafehy ny fientanam-pony ka tao ireo naratra sy lasa adala tsy fidiny.
Nampidirina amin’ny fandaharam-pianarana: 78% ny mpianatra liana amin’ny fananahana fahasalamana 11/11/2019
Fisintahana tao Antsirabe: namantarana izay tsy mbola mazava momba ny PSE 11/11/2019
Bakalorea andiany faharoa- Toamasina: 17,61 % ny taham-pahafahana 11/11/2019
MCC – Toamasina: havaozina ny « Maison Nathan » 11/11/2019
Lapan’ny Kolontsaina: rakotra fitiavana ny « Poopy 100% » 11/11/2019